SAMOTALIS: 9 Qoddob Oo Lagu Soo Af-jaray Khilaafkii Xisbiga Talladda Haya Ee KULMIYE
9 Qoddob Oo Lagu Soo Af-jaray Khilaafkii Xisbiga Talladda Haya Ee KULMIYE
Hargeysa(Somaliland.Org)- Guddidii turxaan bixinta xisbiga talladda haya ee KULMIYE, ayaa caawa ku dhawaaqay 9 Qoddob oo ay ugu tallo-galeen in lagu suuliyo khilaafkii xisbigaas.
Shir madaxtooyadda lagu qabtay oo ay ka soo qeyb galeen Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), Gudoomiyaha xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, Hoggaanka xisbiga KULMIYE, Wasiirro iyo xubno badan oo ka mid ah Guddida fulinta iyo Golaha dhexe, ayaa lagu shaaciyay qoddobada Guddida turxaan bixintu soo saartay, waxaanay Hoggaanka xisbigu ay sheegeen inay aqbaleen qoddobadan.
Go’aanka Guddida turxaan-bixinta oo uu ku dhawaaqay Xoghayaha Guddidaas Xildhibaan Cali Xasan Maxamed (Cali-mareexaan) ayaa u dhignaa sidan:-
“Mudanayaal, sida aad la socotaan waxaa madaxweynaha JSL u magacaabay gudi turxaan bixin khilaafka soo kala dhex galay madaxda sare ee xisbiga Kulmiye kaas oo saamayn ku yeeshay qabsoomida shirweynaha sadexaad ee xisbiga Kulmiye. Gudidaas oo ka koobnayd toban xubnood waxay si mug iyo miisaan leh uga hawl gashay shaqadii loo igmaday. Gudidu si ay u daristo baaxada khilaafka iyo waxa lagu kala cabanayo waxay kulamo gooni gooni ah la yeelatay dhinacyadii wax kala tirsanayey iyadoo dhinacwalba la yeelatay sadex kulan oo gaar ah. Si khilaafka loo fududeeyo waxay gudidu kulamo shakhsi shakhi ah la yeelatay xubnaha xisbiga ee kala cabanayey kaas oo ay u kala dab qaadaysay (shuttle diplomacy). Kulamadaas gaar gaarka ah ka dib waxay gudigu si toos ah isu soo hor fadhiisiyey dhinacyadii wax kala tirsanayey kuwaas oo dhinac waliba ku soo bandhigay wixii uu tirsaanayey si furan oo saraaxad leh.
Hadaba gudigu iyada oo tixgelinaysa wada jirka xisbiga kana duulaysa sidii shirwaynaha xisbigu ugu qabsoomi lahaa wakhtigii loo cayimay iyadoo dhammaan xisbigu mid yahy. Gudidu markii ay dhagaysay doodihii dhinacyada isla markaana ay si baaxadleh u deristay nuxurka khilaafku ku salaysan yahay waxay soo saartay go’aamadan:-
1. Waxaa awooda qaban qaabada iyo diyaarinta shirka iska leh gudida qabanqaabada shirweynaha, waxaana gudidaas musdanbeed u noqonaya hogaanka xisbiga.
2. Iyada oo raacayo dastuurka xisbiga waxay gudiga fulintu ansixinaysaa afarta xubnood ee lagu soo daray gudida qabanqaabada,
3. Hadii loo baahdo waxka bedelka dastuurka xisbiga waxaa awooda diyaarinta waxka bedelka yeelanaya gudida fulinta, waxaana soo jeedintooda ay u gudbinayaan gudida qabanqaabada oo iyana u gudbin doonta shirweynaha.
4. Iyada oo la dhawrayo wada jirka xisbiga waxay gudidu go’aamisay in dhammaan xubnaha hogaanka oo kala ah gudoomiyaha, afartiisa kuxigeen iyo xogahaya guud sidooda loo daayo oo aan cidi kula tartamin isla markaana shirweynaha dib loogu soo doorto si loo mariyo sharciyada
5. In Cabdicasiis Maxamed Samaale uu ka mid noqdo gudida fulinta ee xisbiga.
6. gudida fulinta ee cusub waxaa soo magacaabaya hogaanka xisbiga oo wada jira , waxaanay kala tashanayaan Madaxwaynaha JSL.
7. Saddexda urur ee kala ah Dalsan , Damal iyo Umadda waa in la siidaayo liisaska xubnaha Golayaashooda dhexe si ay uga qayb galaan shirwaynaha xisbiga ee soo socda .
8. Sida uu dhigayo sharciga xisbigu Ergooyinka shirwaynuhu waxay ka imanayaan gobolada iyo degmooyinka , waxaana soo xulaya madaxda xisbiga ee degmooyinka iyo Gobolada iyo masuuliyiinta heer qaran ee xisbiga u matalaya gobolada iyo degmooyinka .
9. Soo xulista xubnaha golaha dhexe ee lagu dooran doono shirwaynaha waxaa lagu soo xulayaa sida ku cad qodobka sideedaad.
1.Wasiirka Arrimaha Dibada (Gudoomiye )
2.Wasiirka Wasaarada Gaashaandhiga (G-Xigeen)
3.Xil.Cali Xasan Maxamed (Xoghaye )
4.Wasiirka Duulista Iyo Hawada
5.Wasiirka Waxbarashada Iyo Tacliinta Sare (Xubin )
6.Wasiirka Diinta iyo Awqaafta (xubin)
7.Maareeyaha Haayada Abaabul ka saarka Qaranka iyo Dib u Jihaynta (xubin)
8.Xil.Maxamed Axmed Obsiye (xubin)
9.Xil.C/rahmaan Abubakar Good (xubin)
10. C/laahi Jaamac Geel jire (Xubin).”